इरान-अमेरिका तनाव: इरानी जवाफी हमलापछि द्वन्द्व अब चर्केला कि नचर्केला ? « Postpati – News For All
इरान-अमेरिका तनाव: इरानी जवाफी हमलापछि द्वन्द्व अब चर्केला कि नचर्केला ?
पुस २३, काठमाडौँ । इरानले जेनरल कासिम सुलेमानी मारिने गरी भएको अमेरिकी हमलाको बदलास्वरूप इराकमा अमेरिकी सैन्यहरू रहेका हवाई अखाडाहरूमा बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको छ ।
यो सन् १९७९ मा तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासलाई कब्जामा लिइएयता इरानले अमेरिकाविरुद्ध गरेको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रकृतिको हमला हो ।
इरानबाट प्रहार गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी क्षेप्यास्त्रहरूले इराकी राजधानी बग्दादको पश्चिमस्थित एरबिल र अल असदमा रहेका दुई हवाई अखाडालाई निशाना बनाएका थिए ।
हमलामा के कति हताहति भए भन्ने स्पष्ट विवरण प्राप्त भएको छैन । उक्त हमलाप्रति वाशिंगटनको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया केही सानो देखिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीटर सन्देश लेख्‍दै “सबै कुरा हालसम्म ठीक रहेको” बताउँदै सम्भावित हताहति र क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको जनाएका थिए ।
अमेरिकी र गठबन्धन सैनिकहरू रहेका दुई इराकी अखाडाहरूमा स्थानीय समय अनुसार बुधवार विहानको दुईबजे हमला भएका थिए ।
इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह खामेनेईले ती हमला अमेरिकाको “मुखमा हानिएको थप्पड” भएको बताएका छन् भने उनले मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैनिक उपस्थितिको अन्त्यको माग गरेका छन् ।
उनको भनाइलाई दोहोर्‍याउँदै, राष्ट्रपति हसन रूहानीले भने सुलेमानीको हत्याको प्रतिक्रिया स्वरूप इरानले दिने “अन्तिम जबाफ” सबै अमेरिकी सैन्यलाई “उक्त क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्नु” हुनेछ ।
इराकका प्रधानमन्त्री अदेल अब्दुल महदीले भनेका छन् उनलाई स्थानीय समय अनुसार मध्यराततिर इरानले एक आक्रमण गर्न लागेको र अमेरिकी सैनिकहरू रहेका इलाकालाई मात्र निशाना बनाइने भनी सावधान गराइएको थियो । उनले इराकी हताहतिका बारे कुनै विवरण प्राप्त नभएको बताएका छन् ।
बीबीसीका प्रतिरक्षा सम्वाददाता जोनाथन मार्कस भन्छन् जेनरल सुलेमानीको महत्व र उनको हत्यापछि व्यक्त भएका भावपूर्ण अभिव्यक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने इरानले अमेरिकी सैनिक अखाडाविरुद्ध गरेको हमला मध्यमस्तरकै हो।
तर के यो इरानले गर्नसक्ने जबाफी कारबाहीको अन्त्य हो त ? जोनाथन मार्कस भन्छन्, “त्यो त समयले नै बताउनेछ।”
तर इरानका विदेशमन्त्री मोहम्मद जवाद जरिफले भनेका छन् उक्त हमला प्रतिरक्षात्मक हो । उनले लेखेका ट्वीटर सन्देशमा आफूहरूले वर्तमान अवस्थालाई युद्धको रूप दिन नचाहेको पनि बताएका छन् ।
बग्दादस्थित बीबीसीका मध्यपूर्व सम्पादक जेरमी बोएन भन्छन् ट्वीटर सन्देशहरूमाथि विचार गर्ने हो भने इरानले सुलेमानीको हत्यापछि आफूले जनाउने जबाफी कारबाहीलाई अब सीमित पार्न चाहेको देखिन्छ र उसले अब त्यहाँको स्थितिलाई चर्काउने कि न चर्काउने भन्ने कुरा अमेरिकीहरूको काँधमा छाडेको जस्तो देखिन्छ । -बीबीसीबाट
भारतमा एकैदिन ६४ हजारभन्दा बढी संक्रमित